५ कुरा कहिल्यै नगर्नुस, किन ? – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
२०७४, १३ माघ शनिबार १७:५१
मित्र जानिजानि वा अनजानमै हामी छौं भनेर हाम्रो व्यक्तिगत विकासका लागि राम्रो केही कुराहरू गर्छन्। त्यसपछि राम्रो बस पाँच कुराहरू तपाईंसँग साझेदारी निकै लामो म छु म पालन यी कुराहरू सूची सक्छ। तपाईंले केही कुरामा आफ्नो जीवन राम्रो हुनेछ पक्कै यहाँ बाट पाउन भने शायद तपाईंले यी पहिले नै केही कुराहरू अभ्यास गर्नुस् ।
१) अर्कोको बुराईको आनन्द लिनु
यहाँ हामी हेर्न अरूको अगाडि तेस्रो हानि हुँदैन छ जो म आवश्यक अर्को कुरा त्यहाँ अरू कसैको दुष्ट र यो थियो भने हामी ब्याज थप्न हुँदैन थियो एक प्रारम्भिक उमेर देखि सुनवाई गर्दै मजा लिनु हुँदैन यदि तपाईं यसलाई चासो देखाउनुहुन्छ भने, तपाईंले कहीं पनि नकारात्मकता पनि आकर्षित गर्नुहुन्छ। सायद सबै भन्दा राम्रो तरिका तपाईं आफूलाई अगाडि Bkhud मा सुन्दर हुनेछ, ती टाढा तपाईं बहिरा र यस्तो विषयमा मौन हुनुहुन्छ भने बस्न बाध्य हुनेछ।
उदाहरणको लागि यदि कसैले कसैको बारेमा मजाक गर्दैछ र तपाईं त्यसो गर्दा हँसिलो छैन भने सम्भवतः उसले तपाईंको सामने अर्को पटक यो गर्दैन। यो पनि बुझ्नुहोस् कि जो तपाईं को सामने अरुको मजाक बनाउनु पनि अरुको सामने पनि मजाक बनाउनेछ। त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरूलाई हतोत्साहित गर्न ठीक छ।
2) अन्य भित्रको तुलना गर्नुहोस्
यो मानव दोष वा कसैलाई सत्य भन्नुहोस् कि धेरै दुर्व्यवहारहरूको कारण अरूको आनन्द हो जुन हामीले आफ्नै आफ्नै दुःख राख्दैनौं। तपाईं माथि माथि उठ्ने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसैले ध्यान राख्नुहोस् कि केवल एक व्यक्तिले वास्तविकतालाई जान्दछ, हामी मानिसहरूको बाह्य रूपलाई हेर्छौं, र यसलाई वास्तविक अर्थको साथ तुलना गर्नुहोस्। त्यसैले हामी सोच्दछौं कि सामने हामीसँग खुसीभन्दा बढी छ, तर वास्तविकता यो हो कि यस्तो तुलना कुनै पनि अर्थ छैन। तपाईं केवल आफैलाई सुधार गर्न र अर्थहीन तुलना गर्नु पर्दैन।
3) कुनै पनि कामको लागि अरूलाई निर्भर गर्न
मैले धेरै चोटि देखेको छु कि मानिसहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम पूरा गर्न सक्दैन किनभने तिनीहरू कसैलाई निर्भर गर्दछ। कुनै पनि विशेष व्यक्तिमा निर्भर नगर्नुहोस्। तपाइँको लक्ष्य; कार्य समय सीमा भित्र पूर्ण हुनुपर्छ, अब तपाईंको सबैभन्दा राम्रो साथीले तपाईंलाई तुरुन्तै मद्दत गर्न सक्षम भएन भने तपाइँ कसैलाई मद्दत लिन सक्नुहुन्छ, वा सम्भव भए पनि तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ।
यसो गर्दा तपाईंको आत्मविश्वास बढ्ने छ, ती व्यक्ति जसले साना कुरा गर्नमा आत्म-भरोसाजनक हुन्छन्, अझ ठूलो चुनौतीहरू पछाडि पनि पछि, त्यसपछि तपाईंको काममा यो कुरा लिनुहोस्: यो काम आवश्यक छ। एक व्यक्तिको विशेष विशेष होइन।
4) बितेको कुरामा पछुतो लाग्छ
यदि तपाईं अतीतमा भएको छ भने तपाईंलाई दुःख पार्छ, त्यसपछि तपाईले त्यसलाई क्षमा गर्नुहुनेछ … दुई पटक गर्नुहोस् … तेस्रो पटकको लागि नगर्नुहोस्। तपाईं त्यस घटनाबाट के सिक्न सक्नुहुन्छ र फर्वार्ड गर्नुहोस्। जो लोग अक्सर रोया र अरूको सामने, सहानुभूति देखाउन को लागी, तिनीहरूले काट्न थाले।
सबैसँग तिनीहरूको आफ्नै समस्या छ र कसैलाई मनपर्छ भन्दा दुखी जीवन बनाउन मान्छेहरू मनपर्दैन। र यदि तपाईंले यो गर्नुभयो भने तपाईं आफैंको हानि अरूलाई भन्दा अधिक हौ। तपाईं विगतमा फंसिएको छ, र तपाईं यस पल जिन्दगीमा र भविष्यको लागि आफैलाई तयार हुनुहुन्न।
5) ती चाहनाहरूलाई ध्यान दिन चाहँदैनन्
हामी सम्पूर्ण ब्रह्मामा फोकस गर्ने कुरा आश्चर्यजनक हुँदै जान्छौं। त्यसकारण, तपाईंले के हेर्न चाहनुहुन्छ के मा फोकस, यसको बारेमा कुरा गर्नुहोस् र तपाई जुन चाहनुहुन्न जुन कुराहरू।
उदाहरणका लागि: यदि तपाईं आफ्नो आय बढाउन चाहानुहुन्छ भने बढ्दो मुद्रास्फीति र खर्च बारे कुरा गर्नुहोस्, तर नयाँ अवसरहरू र आय सृजनात्मक विचारहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
यो कुरा यस पोष्टमा विस्तारमा व्याख्या गरिएको छ: सोच्नुहोस् तिनीहरू के चाहन्छन् के तिनीहरूले चाहन्छन् के होइनन्! कृपया यसलाई पढ्नुहोस्।
मित्रहरू, म आशा गर्छु कि यी साना चीजहरूमा ध्यान दिएर, तपाईं स्वयं सुधारको बाटोमा छिटो बढ्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनलाई आनन्दित बनाउनुहुनेछ।